ကလေးကိုအရွယ်တော်တော်လေးရောက်မှ အစာကျွေးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ - Hello Sayarwon
အရွယ်မရောက်ခင် Solid foodကျွေးမိလို့ အစာနင်သွားတယ်။ ကလေးက အစာနင်တာကြောင့်သေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြားပြီး ကလေးကို ထိခိုက်မှာစိုးတာကြောင့် ကလေးကိုတော်တော်နဲ့အစာမကျွေးမိဘဲဖြစ်နေတဲ့မိဘတွေများရှိနေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ကလေးက ၆ လပြည့်ပြီဆိုရင် အစာစကျွေးပါ၊လို့ပြောပါရစေနော်။ ကလေးတစ်ယောက်ကို အရွယ်မတိုင်ခင် အစာကျွေးတာက အန္တရာယ်ရှိသလို အရွယ်လွန်ပြီးမှာ အစာကျွေးတာကလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးကို အရွယ်တော်တော်ရောက်မှ အစာကျွေးမိတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ
ကလေးတစ်ယောက်ကို အရွယ်တော်တော်လေးရောက်မှ အစားအစာတွေကို စတင်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ကလေးအနေနဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ အဖိုးတန်ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေကိုလက်လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အရှိန်ယူနေချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေမပြည့်ဘူးဆိုတော့ ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်မှာ ထိခိုက်စေမှာအသေအချာပါ။ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွေနှေးသွားမှာပါ။
ကလေးကို အစောဆုံးအနေနဲ့ ၄ လခွဲနောက်အကျဆုံးက ၆ လမှာကျွေးရမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကလေးကို ၈ လကျော်မှ အစားစကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးရဲ့အာရုံခံနိုင်စွမ်းထိခိုက်စေနိုင်သလို စကားပြောဆိုနိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အစားစားဖို့နဲ့စကားပြောဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ အာရုံခံစားမှုနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကို အစောပိုင်းကာလအတွင်း အစားစားရင်းကနေရမယ့် ဝါးစားတာ၊မျိုချတာတွေကနေ အတွေ့အကြုံရယူရတာပါ။ ဒါကြောင့်ကလေးကို ၈ လကျော်မှ အစားစကျွေးမယ်ဆိုရင် ကလေးက ဒီသင်ယူခွင့်ကို ကန့်သတ်ခံလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးက အသက် ၆ လလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင် ထမင်း၊ ကန်ဇွန်းဥ၊မုန်လာဥနီ၊ရွှေဖရုံသီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းတို့ကိုကြိတ်ခြေပြီး စစားလို့ရပါပြီ။ ဒါက သူတို့အတွက် အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ solid food ပါ။ ဒီကနေမှ ၇ လလောက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ကြက်သားလိုမျိုးအရာတွေကို စပြီးကျွေးလို့ရပါပြီ။ ဒါတွေအပြင် ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ဖို့လိုသလို အာဟာရဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် နို့မှုန့်တိုက်ဖို့လည်းလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖွံဖြိုးဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ ကာလတွေမှာ ကလေးကို အာဟာရပြည့်ဝအောင်မကျွေးမိတာက ဘယ်လောက်တောင် ထိခိုက်စေလိုက်မလဲ။ ကလေးရဲ့ အသက်က ၆ လပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးက ပိုးပြီးလိုအပ်လာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အာဟာရလိုအပ်ချက်အတွက်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ဖို့ အစာခြေစနစ် အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးကို အသက် ၆ လ ဆိုတာနဲ့ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီး အစားစကျွေးဖို့ပြင်သင့်ပါတယ်။
ကလေးကို အစားစကျွေးတဲ့အခါ ဒါလေးတွေသတိထားပေးပါ
ကလေးကိုအစားစကျွေးတဲ့အခါ ဆားလုံးဝမထည့်ဘဲ သံဓါတ်ြဖည့်ပေးနိုင်မယ့် အစားအစာမျိုးကိုအဓိကထားရပါမယ်။
ကယ်လ်လိုရီနည်းပြီး ပရိုတင်းပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာကိုပဲ အဓိကထားကျွေးရပါမယ်။
ကလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိအကျဖြစ်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ပေးပါနော်။
ကလေးကို ၈ လလောက်မှအစားစကျွေးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ
ကလေးကို အစောဆုံး ၄ လခွဲနောက်အကျဆုံးအနေနဲ့ ၆ လမှာ အစားစကျွေးရပါမယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကလေးကို ၆ လနောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် ၈ လမှ အစားစကျွေးမယ်ဆိုရင် ကလေးမှာ အခုလိုမျိုး အခြေအနေတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အစားမစားဘဲ ကလေးက အစားစားဖို့ကြေးများသွားနိုင်တယ်
ကလေးကို အရွယ်မရောက်ခင်အားကျွေးတာကလည်းမကောင်းသလိုနောက်ကျမျကျွေးတာကလည်း မကောင်းပါဘူး။ ဒီတော့ကလေးကခေါင်းမတ်မတ်ထားနိုင်ပြီ။ အစာတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အစောဆုံး ၄ လခွဲ နောက်အကျဆုံး ၆ လအရွယ်မှာ Solid food စစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးပါနော်…….
Risks of introducing solids too early or too latehttps://babygooroo.com/articles/risks-associated-with-introducing-solids-too-early-or-too-late Accessed Date 28 February 2019
When’s the right time to start feedingababy solid foods?https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/expert-answers/starting-solids/faq-20057889 Accessed Date 28 February 2019
Feeding your newborn solids? Stop right now!https://www.parent24.com/Baby/Newborn/why-you-shouldnt-feed-your-newborn-solids-20160829 Accessed Date 28 February 2019
Introducing Solids Too Late Can Impact Your Baby In Some Big Wayshttps://www.romper.com/p/introducing-solids-too-late-can-impact-your-baby-in-some-big-ways-8454948 Accessed Date 28 February 2019